Sri Lanka Oo ka Laabatay Go’aan ka Caraysiiyay Muslimiinta. – Awdalmedia
Sri Lanka ayaa dib uga laabatay amar muran dhaliyay oo ahaa in la gubo meydadka dhammaan dadkii ku dhintay Covid-19 ayna kamid yihiin Muslimiinta.
Dadka dhaleeceya waxay sheegeen in amarkan looga golleeyahay in lagu bartilmaameedsado dadka laga tirada badan yahay. Diinta Islaamka ayaa mamnucday gubidda meydka.
Dowladda ayaa ku doodeysa in aaska meydadka dadka u dhintay Covid-19 ay sumeyn karto biyaha dhulka.
Amarkan lagu joojiyay gubista maydadka muslimiinta ayaa yimid kadib booqasho uu ku tegay dalkaas ra’iisal wasaaraha Pakistan Imran Khan, iyagoo ka codsaday Pakistan taageerada kulanka UNHRC, ee la filayo inay kulan ka yeelato qaraarka cusub oo ka jawaabaya walaaca isa soo taraya ee ka jira Sri Lanka, oo ay ka mid yihiin sida loola dhaqmo dadka Muslimiinta.
Sri Lanka ayaa loogu yeeray inay la xisaabtanto dadka xuquuqda aadanaha ku xadgudba isla markaana cadaaladda loo hor keeno dhibanayaashii dagaalkii sokeeye ee 26 -kasano socday, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100,000 oo qof oo u badnaa dad rayid ah oo ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay ee Tamil.
Sri Lanka ayaa si adag u beenisay eedeymaha loo soo jeediyay waxayna ka codsatay wadamada xubnaha ka ah in aysan taageerin qaraarka, balse dawlada Sri Lanka ayaa mar sii horreysay la kulmay cambaareyn culus oo uga timid kooxaha xuquuqda aadanaha u ololeeyo oo ay ku jirto UNHRC.
Dawladda ayaa ku doodeysa in aaska meydadka ay sumayn karto biyaha dhulka, iyadoo lagu saleynayo hadalka guddi khubaro ah, oo aan la garanayn qaabka iyo shuruudaha saxda ah ee ay baaritaankooda ku saleeyeeyn.
Balse hoggaamiyeyaasha siyaasadda, diimaha iyo bulshada ayaa si isdaba joog ah su’aal uga keenay arrintan, iyagoo tilmaamaya in ka badan 190 waddan ay oggolaadeen aaska, sidoo kale waxa aaska oggolaaday Ururka Caafimaadka Adduunka.
Kiiskan gubista maydadka ayaa gaaray Maxkamadda Sare, laakiin kiisaska qaar ayaa la laalay iyada oo aan wax sharaxaad ah laga bixin.
Qarax Ismiidaamin ah Oo ka Dhacay Magaalada Baydhabo.
Xildhibaano Diiday ka Qaybgalka Ansixinta Xeerka Furashada Ururada Siyaasada.